Izahay koa anie mba te hahafantatra ny fahasalamanao amin’izao sangy be mianjady aminao izao e ! Ny anay io fahasahiranana io efa lasa sakafo isan’andro nanomboka tamin’ireny kobaka nataonao tamin’ny 10 taona lasa ireny. Fa ianao hoy aho aoka tsy ho jamba amin’ireo akamanao manao havana raha misy patsa ireo. Raha very eo anie ka tsy ho hitanay izay azo atao eee! Hmmm..!! Tsy te hahita aho ! Ianao moa hoe tia an’ilay mirifatra ohatry ny anona iny ka dia enga anie mba tsy hirifatra toy izay koa ny fivadihan’ireo tampoka ka hampitsotsorika anao. Tsy misy izay tsy kopy anie hoe tapimaso sy praogan’ilay teo alohanao io izestiavanao io eeeh !